GAROWE, Puntland - Madaxweynaha cusub ee dowladda Puntland, mudane Saciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta kormeer shaqo ku tagey xaruunta Wasaaradda Maaliyadda iyo Bangiga Dhexe ee magaalada Garowe.
Mudane Deni oo kormeerkiisa ku wehliyay Madaxweyne ku xigeenka cusub, Axmed Cismaan Karaash, ayaa la kulmay Mas'uuliyiinta wasaaradda oo uu ku jiro wasiirka, Cabdulaahi Siciid Carshe [Dhaqaaje].
Deni ayaa Wasiirka maaliyadda wax ka weydiiyay inuu dhaqan-gelay amarkii uu ku xannibay maalintii la doortay 8-dii bishan in lacago lagala baxo akoonada dowladda ee Bangiga iyo xawaaladaha gaarka loo leeyahay, maadaama uu isbedel dhacay.
Kulankaan ayaa imaanayaa maalmo kadib markii Madaxwayne Deni uu amar ku bixiyay isla saacadiiba la doortay inaan wax lacag ah lagala bixi karin koontada ay dowladda ku leedahay Bankiyada gaarka ah iyo midka ay DPL maamusho.
Madaxweynaha cusub ee Puntland, oo dhaqaalo yahan ah ayaa lagu rajo wayn yahay inuu wax badan ka bedali doono dhaqaalaha Puntland oo hoos-u dhac wayn uu ku yimid iyo musuq-maasuq xargaha goostay 5ta sano ee uu xafiiska joogay Gaas.
Xilkaan waxaa u tartantay 11 Musharax, oo uu kamid yahay Camey oo horey xilkan u hayay.